- Portuguese water dog Bo Obama dies of cancer-- https://www.washingtonpost.com/science/2021/05/08/obama-dog-bo-dies/ Burmese will love this, as "Bo" in Burme...
Portuguese water dog Bo Obama dies of cancer-- - https://www.washingtonpost.com/science/2021/05/08/obama-dog-bo-dies/ Burmese will love this, as "Bo" in Burmese means "Boss" "Englishman" or "Commander" ...
စိတျခှနျအား..... - အခွနေကေ လူတှကေိုယျ့ပိုကျဆံနဲ့ကိုယျအရူးမီးဝိုငျးနကွေပွီ....။ ကိုယျယုံကွညျစှာအပျနှံထားတဲ့ ငှတှေကေို ပွနျထုတျမရ....။ ဇှဲရှိရှိနဲ့ထုတျရထားတဲ့သူတှကေတြော့ ပစ်...
The impact of COVID-19 on the civil society sector in Cambodia:ayear on - The voices of and inputs from communities and civil society in national strategic development planning have not been heard. The post The impact of COVID-...
US House Foreign Affairs Committee “The Unfolding Crisis in Burma” -
၂၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇ ခံစားမူ
ဒီနေ့တော့.. မပျော်ပါ။ ၀မ်းနည်းတယ်။ ကြေကွဲတယ်။ ရှက်တယ်။ ကြောက်တယ် ။ သနားတယ်။ နာကြည်းတယ်။ ဂုဏ်ယူ တယ် ။ လေးစား တယ် ။ ကိုးကွယ်ရာမဲ့ မိတယ်။ ကိုးကွယ် ရာထပ်ရှာမိတယ်။
ဒါပေမဲ့... မျှော်လင့်ရမယ်။ ယုံကြည် ရမယ်။ မေတ္တာ တွေ ဆက်ပို့ ရဦးမယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ဆို.. နက်ဖြန်တွေ အများ ကြီး ရှိသေးတယ်လေ။